Sonkorowga - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Tababbarka Caafimaadka > Diabetes
Waxbadan ka baro sonkorowga iyo sida loo maareeyo astaamahaaga.
Sonkorowgu waa cudur jirkaagu uu sonkor badan ku leeyahay socodka dhiiga. Marka sonkortu ku badan tahay dhiigaaga, waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo daran gaar ahaan marka sonkorowga aan la xakamayn. La socodka heerka sonkorta dhiigaaga iyo raacida tilmaamaha bixiyahaaga ayaa fure u ah in xaaladaada la xakameeyo.
Waxaa jira laba nooc oo sonkorow ah:
Nooca sonkorowga 1: Xaalad ah in xammeetidu aysan awoodin inay soo saarto insulin. Waxaa sidoo kale loo yaqaan sonkorowga ku tiirsan insulin.
Nooca sonkorowga 2: Xaalad ah in jidhku aanu soo saarin insulin ku filan ama aanu u isticmaalin si habboon, ama ku guuldareysto inuu si habboon u isticmaalo una kaydiyo gulukoos.
Sonkorowgu wuxuu macnaheedu noqon karaa inaad si dhow ula socoto cuntadaada oo aad u hubiso sonkorta dhiiggaaga si joogto ah. Marka heerarka sonkorta dhiiggaagu aad u sarreeyaan ama aad u hooseeyaan, tani waxay kuu horseedi kartaa inaad si daran u xanuunsato. Hubinta inaad heleyso nafaqooyinka aad ubaahantahay waa lama huraan.
Sideed u maarayn kartaa sonkorowgaaga?
Maareynta sonkorowga macnaheedu waa inaad heerarka sonkorta dhiiggaaga caadi ka dhigto. Inaad yeelato qorshe wanaagsan waxay kaa caawin kartaa baabi'inta dhibaatooyinka waxayna kaa caawin kartaa inaad ilaaliso kelyahaaga, beerkaaga, caafimaadka afka iyo indhaha sidoo kale waxay kaa caawin kartaa ka hortagga wareegga oo xumaada Daaweyntu way ku kala duwanaan kartaa labada nooc ee sonkorowga. Fahamka kaladuwanaanshaha ayaa muhiim u ah dariiqa daryeelka ee saxda ah ee caafimaadkaaga.
Kala hadal dhakhtarkaaga qorshaha daryeelka sonkorowga ee adiga kugu habboon. Waxyaabaha qaarkood qorshahaaga daryeelka waa inuu ku jiraa waa:
U tagista dhaqtarka indhaha.
Adoo cagahaaga fiirinaya.
U aadida dhakhtarka ilkaha.
Tijaabinta howlaha kalyaha.
Fahamka daawooyinka aad qaadanaysid.
La socodka heerarka sonkorta dhiiggaaga.
Waxyaabaha kale ee aad sameyn karto si aad uga caawiso maareynta sonkorowgaaga waa:
Raac tilmaamaha bixiyahaaga ee qaadashada kiniin kasta.
Yaree isticmaalka aalkolada.
Raac qorshaha jimicsiga jirka.
Sigaar ha cabin. Jooji haddii aad sameyso.
Ku biir koox taageero ah.
Kala hadal qorshahaaga daryeelka sonkorowga bixiyahaaga
Qorshahaagu wuxuu u baahan yahay inuu tixgeliyo nooca sonkorowgaaga, jadwalkaaga, sida aad u firfircoon tahay, asalka dhaqankaaga, iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee laga yaabo inaad qabto. Waxaad ubaahantahay inaad kaqeybqaadato abuuritaanka qorshahaaga daryeelka sonkorowga. Haddii kale uma badna in qorshuhu ku habboon yahay noloshaada ama aad fahmi doonto waxaad u baahan tahay inaad sameyso. Raadi macluumaad dheeri ah iyo ilo kaa caawinaya maareynta sonkorowgaaga.